persons - Synonyms of persons | Antonyms of persons | Definition of persons | Example of persons | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for persons
Top 30 analogous words or synonyms for persons
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ (International Day of Persons with Disabilities) ကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝမ်းတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ဩဇာအကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀ဝ) The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History ဟု အမည်ရသည့် စာအုပ်အား
ဆာဂေး ဘရင် Sergey သည် The Charlie Rose Show, CNBC နှင့် CNN အပါအဝင် Television Show များ၊ Documentaries တွင် ပါဝင်လာသည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် Sergy နှင့် Larry ကို ABC World News Tonight က "Persons of the Week" ဟု ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ဇန်နဝါရီလတွင် Sergey Brin ကို World Economic Forum ၏ "Young Global Leaders" အဖြစ် အမည်တင်သွင်းခံရသည်။
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း ၎င်း၏တီထွင်မှုမှာ လူ့သမိုင်းတွင် အလွန်တရာပင် အရေးပါခဲ့သော်လည်း အနောက်တိုင်းက သူ့အားဥပေက္ခာပြု လျစ်လျူရှူခဲ့ခြင်းကား အံ့ဩစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ အရေးပါလှပြီး အဓိကကျလှသော စွယ်စုံကျမ်းကြီးများတွင်ပင် သူ့ဘဝ အထုပ္ပတ္တိကို အကျဉ်းမျှပင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သူ၏အမည်အား ကျောင်းသုံးသမိုင်းများတွင်သာ ရံဖန်ရံခါ ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အရေးပါလှသော စက္ကူ၏အကြောင်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့သည့် သမိုင်းသုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Michael H. Harts က သူ၏နာမည်ကျော် The most influential persons in History ဆိုသောစာအုပ်ကို ပြုစုခဲ့ရာ၌ ချိုက်လွန်ဆိုသူ ရှိမှရှိပါလေစဟု သံသယဝင်ခဲ့ရကြောင်းကို ၎င်း၏စာအုပ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူ၏ဂရုတစိုက် လေ့လာသုတေသနပြုချက်များအရ ဆိုင်းလွန်းမှာ အမှန်ကတကယ်ပင် ရှိခဲ့သည်ကို သိခဲ့ရသည်။
ရုရှားသဒ္ဒါ The Russian past tense is gender specific: –л for masculine singular subjects, –ла for feminine singular subjects, –ло for neuter singular subjects, and –ли for plural subjects. This gender specificity applies to all persons; thus, to say "I slept",amale speaker would say я спал, whileafemale speaker would say я спала.
စက္ကူ စက္ကူကို ပထမဦးစွာ အေဒီ ၁၀၅ ခုနှစ်ခန့်က အင်ပါယာရှင်ကြီး ဟိုတီထံတွင် နန်းတွင်းမှူးမတ်တစ်ဦး ဖြစ်သူ TS'AI LUN ဆိုင်းလွန်းမှတီထွင်ခဲ့သည်။ သူသည် စက္ကူကိုတီထွင်ခဲ့သော်လည်း သူ၏အမည်ကိုစာဖတ်သူအများစုမှာ အသိနည်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်း၏တီထွင်မှုမှာအလွန်တရာပင် အရေးပါခဲ့သော်လည်း အနောက်တိုင်းကသူ့အားဥပေက္ခာပြု လျစ်လျူရှူခဲ့ခြင်းကား အံ့ဩစရာပင်ဖြစ်သည်။ အရေးပါလှ့ပြီးအဓိကကျလှသော စွယ်စုံကျမ်းကြီးများတွင်ပင် သူ့ဘဝအထုပ္ပတ္တိကို အကျဉ်းမျှပင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သူ၏အမည်အား ကျောင်းသုံးသမိုင်းများတွင် သာရံဖန်ရံခါ ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အရေးပါလှသော စက္ကူ၏အကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့သည့်သမိုင်းသုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Michael H.Harts ကသူ၏နာမည်ကျော် The most influential persons in History
ရုရှားသဒ္ဒါ The present tense of the verb быть is today normally used only in the third-person singular form, which is often used for all the persons and numbers. As late as the nineteenth century, the full conjugation, which today is never used, was somewhat more natural: forms occur in the Synodal Bible, in Dostoevsky and in the bylinas (былины ) or oral folk-epics, which were transcribed at that time. The paradigm shows as well as anything else the Indo-European affinity of Russian:
Bakersfield sound Buck Owens and The Buckaroos နှင့် Merle Haggard and the Strangers တို့သည် Bakersfield sound ခေတ်တွင် အအောင်မြင်ဆုံး အနုပညာရှင်များဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀-၇၀ တွင် Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Chris Hillmanနှင့် Gram Persons of the Byrds and the Flying Burrito Brothers နှင့် ၁၉၈၀နှင့် ၉၀တွင် Highway 101, Hillmanနှင့် The Desert Rose Band နှင့် Marty Stuart နှင့် Big House, Dwight Yoakam, Red Simpson, Ferlin Husky, Dave Alvin, The Derailers, The Mavericks, Dale Watson တို့သည် လက်ရှိဆယ်စုနှစ်များတိုင်အောင် Bakersfield sound ကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်။ ဒေသသစ်အနုပညာရှင်များသည် ပုံစံဟောင်းများဖြစ်သော်လည်း rock and roll နှင့် blues ဂီတများပေါင်းထည့်ခဲ့ကြသည်။ Monty Byrom နှင့် Chuck Seaton တို့လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ Slim the Drifter, Steve Davis and Stamprde Band, The Western Connection နှင့် The Fruit Tramps တို့သည် Bakersfield sound ဖြန့်ချီသူများထဲတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။Bakersfield သည် သီးသန့်ကန့်သတ်မထားသော်လည်း ၄၀၊၅၀၊၆၀နှင့် ရ၀ ခုနှစ်၏ Emmylou Harris, Gram Parsons, the Burrito Brothers နှင့် the Eagle တို့၏ ဂီတနှင့် အတူ ကယ်လီဖိုးနီးယား country sound များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ သူတို့သည် Bakersfield sound မှချဲ့ထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ Marriage between Muslims and those of other faiths is not permitted, and non-Muslims must CONVERT to Islam if they wish to marryaMuslim. Muslims who wish to convert to another religion face such official and societal pressure not to leave Islam that conversion is extremely difficult if not impossible in practice. Permission from the Ministry of Religious Affairs must be obtained to convert from Islam, and there were no reports of anyone requesting such permission during the reporting period. There were instances during the period covered by this report of persons, often foreign women, who converted to Islam asaprelude to marrying Muslims. Government statistics reported that eight percent of the 312 conversions to Islam during the reporting period were due to marriage. Unlike in the past, there were no cases of divorced Muslim converts who, because of official and societal pressure, remained officially Muslim if they did not wish to do so.
မန္တလေး နန်းတော် The west room, which was formerly divided into several smaller ones, was the principal living room of Mindon, and no other persons were allowed to sleep there except the four principal queens, to each of whom was appointedaroom near the royal bed-chamber, which consisted ofasmall room surmounted byapyatthat, or small spire consisting of seven superposed roofs similar to the Golden Spire over the Lion Throne Room on the cast of the Palace. This pyatthat was of gilt copper. On each side of this spired-room were constantly kept open two white umbrellas. The ladies-in-waiting of the Glass Palace were, by turns, stationed around the west room to wait upon. Their Majesties; they, whether princesses or minor queens, were not allowed to enter this room with slippers on or with their golden umbrellas: they had to leave these at the entrance with their attendants.